Xikmadaha Cajiibka Ah - Xogside-news Xogside
Home BARNAAMIJYADA Xikmadaha Cajiibka ah
Xikmadaha Cajiibka ah
Xogside – Waxa la waydiiyay Imaam Ahmed (AHN) Qofka banii’aadamka ahi goorma ayu daal iyo shaqo ka nasanayaa ? Waxaana uu ku jawaabay “ Marka uu lugta u horaysa Janada la galo ayuu ka nasanayaa “ Allah ha inagu arsaaqo janadiisa.
Nin dadkii wanaagsana ee hore ka mid ahaa ( Salafu Saalix) ayaa yidhi “ Haddii aad la kulanto, qudhaanjo godkeeda ku socota haku joogsan, adigoo dar Allah (sw) arinkaasi u samaynayaa”. Waxaana laga yabaa in Allah (sw) kuugu naxariisto sida aad iyadaba ugu naxariisatay.
“ Haddii aad soo marto Shimbir biyo cabaysa, iska jir inaad u dhowaato oo aad cabsi ku abuurto, adigoo arinkaasi Allah dartii u samaynaya, waxaana laga yabaa in maalinta Qiyaame Allah (sw) ku magan geliyo arinkaasi. “ Hana yarysan wanaag, ma garanaysid kan jano aad ku gelyasee.
Samee wanaagga haba yaraadee, waayo ma garnaysid wanaagga Jannada lagu gelayo
Previous articleXidhiidhka Ka Dhexeeya Dhalinyarada Qaadka Cuna Iyo Shaqada la’aanta
Next articleDareenka Caruurta Ee Dhismaha Qoyska